Mogadishu Journal » Messi ayaa yiri hadal aan micna laheyn Koeman iyadoo Barca ay ugaarsaneyso horyaalka LaLiga
Messi ayaa yiri hadal aan micna laheyn Koeman iyadoo Barca ay ugaarsaneyso horyaalka LaLiga
Ronald Koeman ayaa sheegay “inuusan wax xiiso ah u hayn” warar dheeri ah oo ku saabsan mustaqbalka Lionel Messi iyadoo Barcelona ay u dagaallameyso hanashada horyaalka LaLiga.
Sida laga soo xigtay TNT Sports, Paris Saint-Germain ayaa isku diyaarineysa dalab qandaraas “aan laga badin karin” si ay isugu dayaan inay Messi ugu soo jiitaan caasimada Faransiiska.
Qandaraaska Messi wuxuu dhacayaa dhamaadka bisha June, sidaas darteed kabtanka Barca ayaa ka tagi kara Camp Nou isagoo ah wakiil xor ah.
Weeraryahanka reer Argentina ayaa si xamaasad leh ugu gudbiyay codsi wareejin bishii Ogosto ee la soo dhaafay ka hor inta uusan aqbalin inuu la sii joogo kooxda reer Catalan xilli ciyaareedkii 2020-21.
Koeman ayaa ku celiyey rabitaankiisa ah inuu Messi saxiixo heshiis cusub, laakiin waqtigaan diirada la saarayo ayaa ah xaqiijinta guul ay ka gaarto Granada khamiista taas oo ka dhigeysa inay Barca hogaanka u heyso horyaalka.
Tababaraha Barca ayaa yiri shirkiisa jaraa'id Arbacadii: "Ma xiiseynayo waxa soo baxay sababtoo ah ma aqaano inay run tahay iyo inaan rajeynayo inuu nala sii wado.
Waxaan dhowr jeer sheegay in ay tahay inay halkan ku dhammaato, laakiin waa go'aan ay tahay inuu qaato.
Guuldaradii Atletico Madrid ee ka soo gaartay Athletic Bilbao axadii ayaa fursad u siisay Barca inay hal dhibic ku qabato hogaanka kulanka ka dib markii ay garaaceen kooxda kaalinta 8aad ee Granada ee Camp Nou.
Koeman uma arko kooxdiisu inay tahay kooxda ugu cadcad ee loo caleemo saari doono horyaalnimada iyadoo kooxdiisa ay isku diyaarineyso inay isku daydo inay ka booddo Real Madrid iyo Atleti.
Daaficii hore ee Netherlands ayaa yiri: "Kooxda kaalinta koowaad ka baxda ayaa ugu cadcad anaguna ma nihin kuwii ugu horeeyay."
Koeman ayaa sheegay in aysan jirin fursad ay Barca kaga hormari karto nafsadooda hamiga ay ku dooneyso inay meesha uga saarto Real Madrid oo ay u harsan tahay lix kulan.
Ma arkin ciyaartooyda oo ku fikiraya in shaqadii ay dhamaatay, ”ayuu raaciyay. “Hadda waxaan noqon karnaa kuwa ugu cadcad sida ay dad badani qabaan, laakiin sidaas uma fikirayno. Waan ognahay dhibaatada ay leedahay ku guuleysiga kulamada maxaa yeelay tartamayaasha oo dhan wax ayey u ciyaaraan.
“Waxaan bartay inay tahay inaad u ciyaarto ciyaarta ka dib, uma baahnid inaad ku waalato suurtagalnimada jirta haddii aad guuleysato, muhiimaddu waa berrito oo loo diyaar garoobo ciyaar adag.”
Puntland oo shuruud ku xirtay ka qayb galka shirka uu ku baaqay Farmaajo
Xukuumada oo War kasoo saartay kulankii dhax maray Rooble iyo Musharaxiinta